Ingabe Ikhasi Lakho Elithi Mayelana Nathi Liyayilandela Le Mikhuba Engcono Kakhulu? | Martech Zone
An Inkampani ikhasi ngelinye lalawo makhasi anemininingwane ku- lonke uhlu lokuhlola lwewebhusayithi. Ikhasi elibucayi kakhulu kunezinkampani ezinikeza isikweletu ngalo. Kuhle Inkampani Ikhasi livame ukubukwa ngabangaba ngabasebenzi kanye namakhasimende ukuze bafunde kabanzi ngabantu ngemuva kwenkampani. Sivame ukukhohlwa ukuthi akukhona nje izici nezinzuzo amathemba alandelayo - bafuna ukuzizwa beqiniseka ukuthi bazosebenza nabantu ababathembayo futhi ngeke bazisole!
Ukuthembana nenhlonipho yizinto okufanele zizuzwe. Ukuqwashisa kuvela ekubeni phezulu kwengqondo. Lokhu konke kufanele kube izinhloso zokuphela kwecebo lakho lokumaketha, kusuka ku-SEO nokukhangisa kokuqukethwe kuye ekuxhumaneni nomphakathi nakwi-imeyili. Ikhasi lenkampani yakho Mayelana Nathi ngelinye ithuba lokuxoxa indaba elizokusiza unamathele ezingqondweni zamakhasimende akho. (Futhi njengoba AmaBlue Acorn's Ukutadisha kufakazela ukuthi, futhi kuyithuba lokuthengisa.) UVincent Nero, Uchwepheshe Ophakeme Wokumaketha Okuqukethwe
ISiege Media ihlaziye obekufana namakhasi asebenza kakhulu mayelana nathi futhi yahlanganisa nendatshana evelele 50 Okukhuthazayo Mayelana Nathi Izibonelo Zekhasi. Bakhiqize le infographic enhle ekhombisa izindlela ezinhle kakhulu eziyi-11 okufanele uzilandele njengoba uzakhela owakho:
Ukuphakanyiswa kwexabiso - beka isiphakamiso sakho senani ngaphezulu kwesibaya lapho abasebenzisi bachitha khona i-80% yesikhathi sabo.
Izinzuzo - Amakhasimende akhetha ukufunda ngezinzuzo ezinhle kunezimbi.
Vusa Imizwelo - ithemba lakho lizoba ngamathuba ama-2 kuye kwangu-3 okubandakanya izindaba ezingokomzwelo ukubathonya.
Ividiyo - iningi labenzi bezinqumo bakhetha ukubuka ividiyo kunokufunda umbhalo ekhasini.
umsunguli - faka isithombe esibonwayo somsunguli wenkampani yakho, sizokwandisa ukuguqulwa ngama-35%!
Ama ifotho - amakhasimende achitha isikhathi esingu-10% ngaphezulu ebuka izithombe kunokufunda umbhalo ekhasini. I-Splurge yamanye amahlumela obuchwepheshe!
Azikho izithombe zesitoko - Izithombe zesitoko akuzona nje i-blah… empeleni zingukhiye wokungayethembi inkampani.
nobufakazi - Ubufakazi bamakhasimende bukhulisa ukuthengisa ngo-34%!
Ukubuyekezwa okuhle - Abantu abangama-72% bathi ukubuyekezwa okuhle kubenza bathembele ebhizinisini lendawo kakhulu.
Call to Action - ufuna isivakashi senzeni ngemuva kokubuyekeza ikhasi lakho? Ukuguqulwa okuphindwe kathathu ngokungeza i-CTA!
Imininingwane Info - Abantu abangama-51% bacabanga ukuthi imininingwane yokuxhumana ephelele iyinto ebaluleke kunazo zonke engekho kumawebhusayithi. (Sithanda ukukubeka onyaweni ekhasini ngalinye!)
Nayi i-infographic, Amakhasi eSayensi Behind Great About Us.
Tags: mayelanaMayelana NATHImayelana nathi imikhuba emihlemayelana nathi ngezinto zekhasingathi amakhasiimikhuba engcono kakhuluSiege MediaAmakhasi eSayensi Behind Great About UsUVincent Nero
Izithiyo ezi-6 Zokuya Emgwaqweni nge-E-Commerce Yakho